တရုတ် ပီကင်းမြို့ တွင် ၅၅ ရက်ကြာ မှ လူနာအ သစ် ပြန်တွေ့၊ လူအများအပြား ကူးစက်နေနိုင် – Let Pan Daily
တ ရုတ်ပြည် ပီကင်းမြို့တော်မှာ ကိုဗစ် လူနာ အသစ် လုံးဝမတွေ့တာ ၅၅ ရက်တောင်ကြာပြီမို့ လုံးဝကင်းစင်သွားပြီလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် ပီကင်းမြို့က ဦးလေး တစ်ယောက်ဟာ ဆရာဝန်သွားပြပါသတဲ့။ သူ့မှာ ချမ်းဖျားနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့ လက္ခဏာပြတယ်။ ဒါပေမယ့် ချောင်းဆိုး၊ လည်ချောင်းနာနဲ့ ရင်ဘတ်နာတာမျိုးတော့ မရှိဘူး။ PCR Test စစ်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့နေတယ် ဖြစ်နေပါလေရော။ အဲ့ဒါနဲ့ အားလုံး မျက်လုံးပြူးကုန်ကြတယ်။
ပီကင်းမြို့ဆိုတာက အပြင်ကလာတဲ့လူကို Q ထားတဲ့ မြို့။ အသေအချာအကူးမခံရအောင် ဂရုစိုက်တဲ့မြို့။ တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ မျက်စိအောက်ကမြို့။ အဲ့ဒါကိုဘယ့်နှယ် ကိုဗစ်ကြီးက ၅၅ ရက်တောင်ပျောက်နေပြီးမှ အခုကျမှ ဘာလို့ထပေါ်ရတာလဲ အဖြေရှာမရဖြစ်နေကြပါတယ်။
အခု လူနာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်အတွင်း ပီကင်းမြို့ကနေ တခြားကို ခရီးမထွက်ခဲ့ဘူး။ တခြားမြို့ကို ခရီးသွားခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့လည်း ၂ ပတ်အတွင်း ထိတွေ့မှုမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါဆိုရင်သူဘယ်ကကူးသလဲ…
သေချာတာပေါ့။ ရောဂါရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ဆီက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်အတွင်းကူးလာခဲ့တာ။ အဲ့ဒီလူဟာလည်း တခြားကို ခရီးမသွားထားတဲ့သူ။ ဒါဆိုရင် ပီကင်းမြို့ရဲ့ လူထုထဲမှာ ကိုဗစ်လူနာတွေဟာ လူမသိသူမသိ ရှိနေပြီ။ ဘာကြောင့်မသိတာလဲ…
ဒါဟာ Asymptomatic လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာလုံးဝမပြပဲ တစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကိုကူးနေတာမို့ မသိတာ။ A ဆိုတဲ့လူမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိတယ်။ သို့သော် ရောဂါလက္ခဏာ လုံးဝမပြဘူး။ သူကနေ B ဆိုတဲ့ လူကိုကူးတယ်။ B ကလည်း ရောဂါမပြဘူး။ B ကနေ C ကိုကူးတယ်။ C ကနေ D ကို ကူးတယ်။ D မှာကျမှ ရောဂါလက္ခဏာလာပြတယ်။ သို့သော် A , B နဲ့ C က ဘာရောဂါလက္ခဏာမပြပဲ လူတွေကိုလိုက်ကူးပြီးလို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် ပြန်ပျောက်ကင်းနေပြီ။
A ကနေ B, B ကနေ C, C ကနေ D အထိ ကူးစက်ချိန်ဟာ တစ်လလောက် (သို့) ပိုကြာချင်ကြာမယ်။ ဒါကြောင့် ၅၅ ရက်လောက်ပျောက်နေပြီးမှ ရုတ်တရက်ရောဂါပိုးရှိသူ ထတွေ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုစိုးရိမ်စရာလိုလား…
ကျားရှိမှတော့ အန္တရာယ်ရှိမှာပဲ။ စိုးရိမ်စရာပေါ့။ မကိုက်သေးရင်တော့ ကျားက ဘယ်နားနေမှန်းမသိဘူး။ ပီကင်းကူးစက်ရောဂါဌာနက ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သူ Pang Xinghuo က…
“ဒီလိုတွေ့ရှိမှုဟာ အချိန်မရွေး နောက်တစ်ကြိမ် အကြီးအကျယ်ထကူးနိုင် တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပေး သံချောင်းခေါက်သံပါပဲ” တဲ့။ အခု အဲ့ဒီလူနာ ၁၄ ရက်အတွင်း ထိတွေ့ခဲ့သမျှကို ခြေရာအကုန်ပြန်ခံပြီး လိုက်ပါတော့မယ်။ အဲ့ဒီကနေ ဘယ်ကကူးသလဲသိအောင်လုပ်မယ်။ လိုအပ်ရင် အဲ့ဒီလူနေတဲ့ရပ်ကွက်ရော၊ သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကရော လူအားလုံးကို PCR Test လုပ်မယ်။
အဲ့ဒီမှာ စတွေ့လို့ကတော့ လိုအပ်ရင် ဝူဟန့်မြို့လို တမြို့လုံး PCR Test လုပ်ပါ လိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလူနာက ဆရာဝန်ဆီ Mask တပ်ကာ စက်ဘီးစီးပြီးသွားခဲ့ပါသတဲ့။ သူ့အိမ်သားတွေကိုတော့ Q ထားပြီး PCR Test လုပ်နေပါပြီ။
ဟောင်ကောင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ Ben Cowling ကတော့ သူနည်းနည်းလေးတောင်မှ မအံ့ဩပါဘူးတဲ့။
BEIJING, CHINA – MAY 01: A Chinese guard wearsaprotective mask as he stands at the entrance to the Forbidden City as it re-opened to limited visitors or the May holiday, on May 1, 2020 in Beijing, China. Beijing lowered its risk level after more than three months Thursday in advance of the May holiday, allowing most domestic travellers arriving in the city to do so without having to do 14 days quarantine. The Forbidden City opened toalimited number of visitors Friday morning for the first time in more than three months. After decades of growth, officials said China’s economy had shrunk in the latest quarter due to the impact of the coronavirus epidemic. The slump in the world’s second largest economy is regarded asasign of difficult times ahead for the global economy. While industrial sectors in China are showing signs of reviving production,amajority of private companies are operating at only 50% capacity, according to analysts. With the pandemic hitting hard across the world, officially the number of coronavirus cases in China is dwindling, ever since the government imposed sweeping measures to keep the disease from spreading. Officials believe the worst appears to be over in China, though there are concerns of another wave of infections as the government attempts to reboot the world’s second largest economy. Since January, China has recorded more than 81,000 cases of COVID-19 and at least 3200 deaths, mostly in and around the city of Wuhan, in central Hubei province, where the outbreak first started. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
ကိုဗစ်ကို လူထုကြားထဲက နေပျောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူးတဲ့။ အခု တစ်ယောက်တွေ့တယ်မလား။ အဲ့ဒါဆိုသေချာပြီ လူအနည်းငယ်တော့ ကူးစက်ပြီးနေပါပြီတဲ့။ အများစုက Asymptomatic ရောဂါလက္ခဏာလုံးဝမပြပဲ လူတွေကိုထပ်ကူးစက်ကာ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ ဆီးချို၊နှလုံး၊သွေးတိုးသမားတွေ ထိသွားနိုင်ပါတယ်။
ပီကင်းမှာ ၅၅ ရက်လောက်ကြာအောင် ပျောက်နေတော့ ကိုဗစ်ကို မေ့တေ့တေ့တောင်ဖြစ်နေ ပါပြီ။ ကိုဗစ်က မပေါ့ကြဖို့နဲ့ ငါရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ထင်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။
မပေါ့ကြနဲ့။ Mask တပ်ပါ။ လက်ဆေးပါ။ ခပ်ခွာခွာနေပါ။ အားလုံးစည်းကမ်းရှိပါ။ ကိုဗစ် ဟာလူကြားထဲမှာ ရှိနေပါကြောင်း။ ဘယ်မြို့ဘယ်ဒေသကိုလှည့်လည်နေသလဲသာ မသိပါကြောင်း။ ညီညီညွတ်ညွတ် စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ Mask တပ်ကာ ဂရုတစိုက်နေထိုင်ကြပါမှ သူဝင်လို့မရမှာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။